Falceliyaha Bulshadda: 7,000 oo Saameeyayaal Bulsho oo Diyaar u ah | Martech Zone
Falceliyaha Bulshada: 7,000 Saameeyayaal Bulsheed ee Diyaargarowgaaga
Jimcaha, Sebtember 27, 2013 Khamiista, Sebtember 26, 2013 Douglas Karr
ChaCha waa shirkad weyn oo aan in muddo ah la soo shaqeeyay markii ugu horreysay ee aan bilaabay hay'addayda. Way adag tahay in la aamino in ChaCha ay 8 jir tahay… shirkaddu waa agile oo si joogto ah ayey u socotaa una soo fiicnaataa. Iyagu maahan shirkad dooxada ah, sidaa darteed markasta ma ahan kuwa isha lagu hayo - laakiin waxay had iyo jeer ku dhagan yihiin bogagga internetka ee adduunka ugu sarreeya taraafikada. Waqti kadib, waxaan arkay iyaga oo soo raacaya dad aad u tiro badan. Taasi soo socota duulay fursad cusub oo loo helo ganacsiga.
In kasta oo ChaCha ay dhexgashay bulshadooda si ay ula wadaagaan aqoonta, ma jirin cid ka baxsan shabakadda oo toos u heshay - ilaa Dhaqdhaqaaqa Bulshada. Soo-celinta Bulshada waa goob xayeysiin ah oo ka caawisa sumadaha inay ku xirmaan dhagaystayaasha saxda ah iyada oo loo marayo cilaaqaadyo lala yeesho hoggaamiyeyaasha bulshada. Shabakad heer sare ah, oo si xeel dheer loo xushay si loo ballaariyo farriintaada loona abuuro kaqeybgalka macaamiisha astaantaada.
Iyadoo in ka badan 7,000 oo saamileyaal ah, gaadhista shabakaddoodu aad ayay u dhib badan tahay - oo gaadhaysa boqollaal milyan oo qof. Saameeyayaasha ayaa loo kala shaandheeyaa si loo hubiyo in aflagaadada aan loo adeegsan, fariimaha marna la marin habaabinayo, iyo xayeysiinta ayaa si cad loo tilmaamay.
Markuu saameyn kujiro uu kujiro Fal-celinta Bulshada, waxaa lasiiyaa liis lagu qoondeeyay olalaha hadda socda. Kani maahan nidaam otomaatig ah oo Social Reactor uu go'aan uga gaari karo waxa la riixayo oo magacaaga lagu sameynayo Saameeyayaashu way aqrin karaan, dib u eegi karaan kana qayb qaadan karaan ololayaasha ay doorteen. Waxay sidoo kale la socon karaan guddiyadooda - iska indha tirsiga tan iyo markii aan bilaabayo;).
Haddii aad tahay saameyn wax ku ool ah, 'Social Reactor' ayaa kaa doonaya doonta, sidoo kale! Waxay raadinayaan saameyn bulsho oo xiriir dhab ah la leh kuwa raacsan. Waxay raadinayaan hoggaamiyeyaal kaabayaal bulsheed oo fahmaya dhagaystayaashooda. Waxay u baahan yihiin dad caqli badan oo garanaya sida loo farsameeyo farriimaha adag ee ku dhiirrigeliya dhagaystayaashooda inay wax qabtaan. Ku soo biir Saameeyayaasha Falcelinta Bulshada hadda.
Tags: Chacharaadso saameynsaamayntasaameyn ku yeelashada suuq geyntaxayaysiinta warbaahinta bulshadafal-celinta bulshada
Adphorus: Facebook Ad iyo Social CRM Platform
Sep 23, 2015 at 10: 46 PM
Immisa taageerayaal ah ayaad u baahan tahay inaad ku biirto
Sep 24, 2015 at 3: 52 PM
Nabadeey Alison - Ma hubo oo xiriirkaygu ma sii joogo! Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad toos ula xiriirto.